`ဒါဟာ လုံးဝဟာသပဲ´ လို့ ဆိုလိုက်​ပြီး ဖီဖာတစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို မက်​ဆီ မရသင့်​တဲ့ အ​ကြောင်းကို ရှင်းပြလိုက်​တဲ့ ​ပေါလ်​မာဆွန်​ - SPORTS MYANMAR
`ဒါဟာ လုံးဝဟာသပဲ´ လို့ ဆိုလိုက်​ပြီး ဖီဖာတစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို မက်​ဆီ မရသင့်​တဲ့ အ​ကြောင်းကို ရှင်းပြလိုက်​တဲ့ ​ပေါလ်​မာဆွန်​
​ပေါလ်​မာဆွန်​ က the Fifa Men’s Player of the Year ဆုကို ဘာစီလိုနာ စတား လီယွန်​နယ်​မက်​ဆီ ဆွတ်​ခူး သွားခဲ့တဲ့ အတွက်​ မ​ပျော်​မရွှင်​ ဖြစ်​​နေပြီး မီလန်​မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပွဲမှာ လီ​ဗာပူး ​နောက်​ခံလူ ​ဗာဂျယ်​​ဗန်​ဒိုက်​ အ​နေနဲ့ အဆိုပါ ဆုနဲ့ ဂုဏ်​ပြုခြင်း မခံရတာဟာ တကယ့်​ကို ဟာသ ဖြစ်​တယ်​လို့ ဆိုသွားခဲ့ပါတယ်​။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘာစီလိုနာ အသင်းအတွက်​ စုစု​ပေါင်း သွင်းဂိုး ၅၁ ဂိုး သွင်းယူ ခဲ့တဲ့ မက်ဆီဟာ ​ဗန်​ဒိုက်​ ၊ ​ခရစ်​စတီယာနို​ရော်​နယ်​ဒို တို့ကို ​ကျော်​ကာ ဖီဖာက ချီးမြှင့်​ခဲ့တဲ့ တစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး အမျိုးသား ​ဘောလုံးသမားဆုကို ရရှိသွား ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့​အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမား အဖြစ်​ လူကာမိုဒရစ်​ ​နေရာမှာ အစားဝင်​ ခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ​ဘောလုံးရာသီက လီ​ဗာပူး ကို ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဆုဖလား အပြင်​ နယ်​သာလန်​ အသင်းကို ယူအီးအက်​​​အေ Nations league ဖိုင်​နယ်​ ပို့​ဆောင်​ ​ပေးခဲ့တဲ့ ​ဗန်​ဒိုက်​ဟာ မကြာ​သေးမီက ဥ​ရောပ အ​ကောင်းဆုံး ဆုနဲ့ အ​ကောင်းဆုံး ​နောက်​ခံလူ ဆု​တွေ ရထား ခဲ့တာ​ကြောင့်​ ဒီဆုအတွက်​ ​ရေပန်းစား ​နေခဲ့တာ ဖြစ်​​ပေမယ့်​လည်း တကယ်​တမ်း​တော့ မက်​ဆီကသာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်​အတွက်​ ဖီဖာတစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်သွား ခဲ့ပါတယ်​။
အာဆင်​နယ်​ ကစားသမား​ဟောင်း ​ပေါလ်​မာဆွန်​ က​တော့ ဒီဆုအတွက်​ ​ဗန်​ဒိုက်​ ကို မ​ရွေးချယ်​ ခဲ့တဲ့ အတွက်​ အလွန်​အမင်း အံ့အားသင့်​ ​နေပြီး ကမ္ဘာ့အ​ကောင်းဆုံး မန်​​နေဂျာဆု ရရှိ ခဲ့တဲ့ ယာဂန်​က​လော့ ကို​တော့ ချီးကျူး သွားခဲ့ပါတယ်​။
ဖီဖာတစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆုနဲ့ မက်​ဆီ ထိုက်​တန်​ သလား ဆိုတဲ့ ​မေးခွန်းကို မာဆွန်​ က `No. No ဒါဟာ လုံးဝကို ဟာသ ပါပဲ။ ဝမ်းနည်း ပါတယ်​။ ဒါဟာ ဟာသတစ်​ခုပါ။ မက်​ဆီဟာ ရာသီတိုင်း သူလုပ်​ပြ ​နေကြ အရာ​တွေကို လုပ်​ပြ ​ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ဘာစီလိုနာ ကို ​နောက်​တဆင့်​ကို ​သယ်​​ဆောင်​ မသွား နိုင်​ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ဒီအသင်းကို ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖလား မဆွတ်​ခူး ​ပေးနိုင်​ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ အ​ခြေအ​နေ ပါပဲ။ အလာ​ဗက်​စ်​နဲ့ ပွဲမှာ သူ ဘယ်​​လောက်​ များများ ရခဲ့လိုလဲ? ဖီဖာတစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမား ဆု ဆိုတာ စပယ်​ရှယ်​ အရာ​တွေ လုပ်​​ပြမှ ဆွတ်​ခူး ရမှာပါ။ ​ဗန်​ဒိုက်​ဟာ ဒီလို အရာ​တွေ လုပ်​ပြ ခဲ့ပါတယ်​။ သူ လီ​ဗာပူး အသင်းကို ချန်​ပီယံလိဂ်​ဖလား ရယူ ​ပေးခဲ့ပါတယ်​။
ဒါဟာ ဘာစီလိုနာ အသင်း ဆွတ်​ခူး ချင်​တဲ့ အရာပါ။ ခင်​​ဗျား သူတို့ကို ​မေးကြည့်​ပါဦး ။ လာလီဂါ အမှတ်​​ပေးဖလား ကို ယူချင်​လား ? ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖလားကို လိုချင်​လား? လို့​ပေါ့။ သူတို့ ​သေချာ​ပေါက်​ ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖလားကိုပဲ ​ရွေးချယ်​ ပါလိမ့်​မယ်​။ ကျွန်​​တော့်​ အတွက်​ က​တော့ ဒါဟာ လုံးဝ ဟာသ ပါပဲ။ တကယ့်​ကို ဟာသ ပါပဲ။ မက်​​ဆီ ဘာ့​ကြောင့်​ ဆွတ်​ခူး ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ခင်​​ဗျားတို့ သိကြလား။ ဒါကို စတင်​ ​ပေးတဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်​က စပြီး ​ရော်​နယ်​ဒို ဟာ ပထမ ၂နှစ်​ကို ဆွတ်​ခူး ခဲ့ပါတယ်​။ အဲဒီ​နောက်​ မိုဒရစ်​ဟာ မနှစ်​က ဆွတ်​ခူး ခဲ့ပါတယ်​။ ဒါ့​ကြောင့်​ သူတို့ ဒါကို မက်​ဆီကို ​ပေးဖို့ ကျန်​​နေပါ​တယ်​။
​ဗန်​ဒိုက်​ အ​နေနဲ့ ဒီထက်​ ပိုပြီး ဘာလုပ်​ ပြရမှာလဲ? သူဟာ လီ​ဗာပူး ကို ချန်​ပီယံလိဂ်​ ဖလား အပြင်​ ​ဟော်​လန်​ကို ဥ​ရောပ Nations league final ​တောင်​ ပို့​ပေး ခဲ့ပါ​သေးတယ်​။ ကျွန်​​တော်​ မယုံကြည်​ နိုင်​ပါဘူး။ သူဟာ ဒီအသင်း​တွေကို ​နောက်​တဆင့်​ကို ပို့​ပေး ခဲ့တာပါ။ မက်​ဆီဟာ မနှစ်​က ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ​နောက်တဆင့်​ကို မပို့​ဆောင်​ နိုင်​ခဲ့ပါဘူး။ ​နောက်​ထပ်​ level တစ်​ခုကို သူ မ​ခေါ်​ဆောင်​ နိုင်​ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ နှစ်​တိုင်း လုပ်​​နေကြ အရာကိုပဲ လုပ်​ခဲ့တာပါ။ ​ဗန်​ဒိုက်​ဟာ လီ​​ဗာပူးကို အခြား level တစ်​ခုကို လုံးဝ ​ရောက်​​စေ ခဲ့ပါတယ်​။ အကယ်​၍ နည်းပြဟာ တစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး မန်​​နေဂျာ ကို ရခဲ့ပြီ ဆိုရင်​ ဘာ့​ကြောင့်​ ကစားသမား က​ကော အ​ကောင်းဆုံး ကစားသမား မဖြစ်​ ခဲ့တာလဲ? ” လို့ ​ဝေဖန်​ သွားပါတယ်​။
​ဗန်​ဒိုက်​ အ​နေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလို စွမ်း​ဆောင်​ နိုင်​ခဲ့မယ်​ ဆိုရင်​​ကော လာမည့်​ နှစ်​မှာ ဆွတ်​ခူး နိုင်​မလား ဆိုတဲ့ ​မေးခွန်း ကို မာ​ဆွန်​က “ဒီဆုကို ဆွတ်​ခူး နိုင်​ဖို့ အတွက်​ ဆိုတာ သူ့အတွက်​ ခက်​ခဲမှာပါ။ မနှစ်​က သူလုပ်​ပြ ခဲ့တာ​တွေကို ကြည့်​ရင်​ သူ ​နောက်​တဆင့်​ကို တက်​နိုင်​မှာလား? သူဒီထက်​ ပို​ကောင်း​အောင်​ ကစား ရမှာလား? ဒီ​ကောင်​​လေးဟာ သူ့ရဲ့ အမြင့်​ဆုံး အချိန်​ ​ရောက်​​နေတာ ဖြစ်​​ကောင်း ဖြစ်​နိုင်​ပါတယ်​။ အကယ်​၍ သူ ဒီထက်​ပိုပြီး စွမ်း​ဆောင်​ပြ မှသာ ဒီဆုကို ဆွတ်​ခူး ပါလိမ့်​မယ်​။ သူ ဒီဆုကို လုံးဝ ရခဲ့သင့်​ပါတယ်​။
အကယ်​၍ သူ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား ဆွတ်​ခူးပြီး ၊ ချန်​ပီယံလိဂ်​ဖလား မရ ခဲ့ဘူးဆိုရင်​ ဖီဖာက ​ပေးမှာလား? သူတို့ ဒါကို ဂရု ပြူသွားမှာလား? သူတို့ဟာ ကျွန်​​တော်​တို့ လိဂ်​ကို ဂရုမစိုက်​ပါဘူး။ တစ်​နှစ်​တာ အ​ကောင်းဆုံး အသင်း ဆိုရင်​လည်း သူတို့ဟာ လာလီဂါ က လူ​တွေကိုပဲ ​​ရွေးချယ်​​လေ့ ရှိပါတယ်​။ ဒီထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂ် ကစားသမား မပါဝင်​ ခဲ့ပါဘူး။” လို့ ​ပြောသွားပါတယ်​။
`ဒါဟာ လုံးဝဟာသပဲ´ လို့ ဆိုလိုကျ​ပွီး ဖီဖာတဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမားဆုကို မကျ​ဆီ မရသငျ့​တဲ့ အ​ကွောငျးကို ရှငျးပွလိုကျ​တဲ့ ​ပေါလျ​မာဆှနျ​
​ပေါလျ​မာဆှနျ​ က the Fifa Men’s Player of the Year ဆုကို ဘာစီလိုနာ စတား လီယှနျ​နယျ​မကျ​ဆီ ဆှတျ​ခူး သှားခဲ့တဲ့ အတှကျ​ မ​ပြျော​မရှငျ​ ဖွဈ​​နပွေီး မီလနျ​မှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ပှဲမှာ လီ​ဗာပူး ​နောကျ​ခံလူ ​ဗာဂယျြ​​ဗနျ​ဒိုကျ​ အ​နနေဲ့ အဆိုပါ ဆုနဲ့ ဂုဏျ​ပွုခွငျး မခံရတာဟာ တကယျ့​ကို ဟာသ ဖွဈ​တယျ​လို့ ဆိုသှားခဲ့ပါတယျ​။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ဘာစီလိုနာ အသငျးအတှကျ​ စုစု​ပေါငျး သှငျးဂိုး ၅၁ ဂိုး သှငျးယူ ခဲ့တဲ့ မကျဆီဟာ ​ဗနျ​ဒိုကျ​ ၊ ​ခရဈ​စတီယာနို​ရျော​နယျ​ဒို တို့ကို ​ကြျော​ကာ ဖီဖာက ခြီးမွှငျ့​ခဲ့တဲ့ တဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး အမြိုးသား ​ဘောလုံးသမားဆုကို ရရှိသှား ခဲ့ပွီး ကမ်ဘာ့​အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမား အဖွဈ​ လူကာမိုဒရဈ​ ​နရောမှာ အစားဝငျ​ ခဲ့တာပါ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ​ဘောလုံးရာသီက လီ​ဗာပူး ကို ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဆုဖလား အပွငျ​ နယျ​သာလနျ​ အသငျးကို ယူအီးအကျ​​​အေ Nations league ဖိုငျ​နယျ​ ပို့​ဆောငျ​ ​ပေးခဲ့တဲ့ ​ဗနျ​ဒိုကျ​ဟာ မကွာ​သေးမီက ဥ​ရောပ အ​ကောငျးဆုံး ဆုနဲ့ အ​ကောငျးဆုံး ​နောကျ​ခံလူ ဆု​တှေ ရထား ခဲ့တာ​ကွောငျ့​ ဒီဆုအတှကျ​ ​ရပေနျးစား ​နခေဲ့တာ ဖွဈ​​ပမေယျ့​လညျး တကယျ​တမျး​တော့ မကျ​ဆီကသာ ၂၀၁၉ ခုနှဈ​အတှကျ​ ဖီဖာတဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမား ဖွဈသှား ခဲ့ပါတယျ​။
အာဆငျ​နယျ​ ကစားသမား​ဟောငျး ​ပေါလျ​မာဆှနျ​ က​တော့ ဒီဆုအတှကျ​ ​ဗနျ​ဒိုကျ​ ကို မ​ရှေးခယျြ​ ခဲ့တဲ့ အတှကျ​ အလှနျ​အမငျး အံ့အားသငျ့​ ​နပွေီး ကမ်ဘာ့အ​ကောငျးဆုံး မနျ​​နဂြောဆု ရရှိ ခဲ့တဲ့ ယာဂနျ​က​လော့ ကို​တော့ ခြီးကြူး သှားခဲ့ပါတယျ​။
ဖီဖာတဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမား ဆုနဲ့ မကျ​ဆီ ထိုကျ​တနျ​ သလား ဆိုတဲ့ ​မေးခှနျးကို မာဆှနျ​ က `No. No ဒါဟာ လုံးဝကို ဟာသ ပါပဲ။ ဝမျးနညျး ပါတယျ​။ ဒါဟာ ဟာသတဈ​ခုပါ။ မကျ​ဆီဟာ ရာသီတိုငျး သူလုပျ​ပွ ​နကွေ အရာ​တှကေို လုပျ​ပွ ​ခဲ့တာပါ။ သူဟာ ဘာစီလိုနာ ကို ​နောကျ​တဆငျ့​ကို ​သယျ​​ဆောငျ​ မသှား နိုငျ​ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ ဒီအသငျးကို ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖလား မဆှတျ​ခူး ​ပေးနိုငျ​ ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာစီလိုနာ အသငျးရဲ့ အ​ခွအေ​နေ ပါပဲ။ အလာ​ဗကျ​ဈ​နဲ့ ပှဲမှာ သူ ဘယျ​​လောကျ​ မြားမြား ရခဲ့လိုလဲ? ဖီဖာတဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမား ဆု ဆိုတာ စပယျ​ရှယျ​ အရာ​တှေ လုပျ​​ပွမှ ဆှတျ​ခူး ရမှာပါ။ ​ဗနျ​ဒိုကျ​ဟာ ဒီလို အရာ​တှေ လုပျ​ပွ ခဲ့ပါတယျ​။ သူ လီ​ဗာပူး အသငျးကို ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ဖလား ရယူ ​ပေးခဲ့ပါတယျ​။
ဒါဟာ ဘာစီလိုနာ အသငျး ဆှတျ​ခူး ခငျြ​တဲ့ အရာပါ။ ခငျ​​ဗြား သူတို့ကို ​မေးကွညျ့​ပါဦး ။ လာလီဂါ အမှတျ​​ပေးဖလား ကို ယူခငျြ​လား ? ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖလားကို လိုခငျြ​လား? လို့​ပေါ့။ သူတို့ ​သခြော​ပေါကျ​ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖလားကိုပဲ ​ရှေးခယျြ​ ပါလိမျ့​မယျ​။ ကြှနျ​​တျော့​ အတှကျ​ က​တော့ ဒါဟာ လုံးဝ ဟာသ ပါပဲ။ တကယျ့​ကို ဟာသ ပါပဲ။ မကျ​​ဆီ ဘာ့​ကွောငျ့​ ဆှတျ​ခူး ခဲ့သလဲ ဆိုတာ ခငျ​​ဗြားတို့ သိကွလား။ ဒါကို စတငျ​ ​ပေးတဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈ​က စပွီး ​ရျော​နယျ​ဒို ဟာ ပထမ ၂နှဈ​ကို ဆှတျ​ခူး ခဲ့ပါတယျ​။ အဲဒီ​နောကျ​ မိုဒရဈ​ဟာ မနှဈ​က ဆှတျ​ခူး ခဲ့ပါတယျ​။ ဒါ့​ကွောငျ့​ သူတို့ ဒါကို မကျ​ဆီကို ​ပေးဖို့ ကနျြ​​နပေါ​တယျ​။
​ဗနျ​ဒိုကျ​ အ​နနေဲ့ ဒီထကျ​ ပိုပွီး ဘာလုပျ​ ပွရမှာလဲ? သူဟာ လီ​ဗာပူး ကို ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ ဖလား အပွငျ​ ​ဟျော​လနျ​ကို ဥ​ရောပ Nations league final ​တောငျ​ ပို့​ပေး ခဲ့ပါ​သေးတယျ​။ ကြှနျ​​တျော​ မယုံကွညျ​ နိုငျ​ပါဘူး။ သူဟာ ဒီအသငျး​တှကေို ​နောကျ​တဆငျ့​ကို ပို့​ပေး ခဲ့တာပါ။ မကျ​ဆီဟာ မနှဈ​က ဘာစီလိုနာ အသငျးကို ​နောကျတဆငျ့​ကို မပို့​ဆောငျ​ နိုငျ​ခဲ့ပါဘူး။ ​နောကျ​ထပျ​ level တဈ​ခုကို သူ မ​ချေါ​ဆောငျ​ နိုငျ​ခဲ့ပါဘူး။ သူဟာ နှဈ​တိုငျး လုပျ​​နကွေ အရာကိုပဲ လုပျ​ခဲ့တာပါ။ ​ဗနျ​ဒိုကျ​ဟာ လီ​​ဗာပူးကို အခွား level တဈ​ခုကို လုံးဝ ​ရောကျ​​စေ ခဲ့ပါတယျ​။ အကယျ​၍ နညျးပွဟာ တဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး မနျ​​နဂြော ကို ရခဲ့ပွီ ဆိုရငျ​ ဘာ့​ကွောငျ့​ ကစားသမား က​ကော အ​ကောငျးဆုံး ကစားသမား မဖွဈ​ ခဲ့တာလဲ? ” လို့ ​ဝဖေနျ​ သှားပါတယျ​။
​ဗနျ​ဒိုကျ​ အ​နနေဲ့ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီကလို စှမျး​ဆောငျ​ နိုငျ​ခဲ့မယျ​ ဆိုရငျ​​ကော လာမညျ့​ နှဈ​မှာ ဆှတျ​ခူး နိုငျ​မလား ဆိုတဲ့ ​မေးခှနျး ကို မာ​ဆှနျ​က “ဒီဆုကို ဆှတျ​ခူး နိုငျ​ဖို့ အတှကျ​ ဆိုတာ သူ့အတှကျ​ ခကျ​ခဲမှာပါ။ မနှဈ​က သူလုပျ​ပွ ခဲ့တာ​တှကေို ကွညျ့​ရငျ​ သူ ​နောကျ​တဆငျ့​ကို တကျ​နိုငျ​မှာလား? သူဒီထကျ​ ပို​ကောငျး​အောငျ​ ကစား ရမှာလား? ဒီ​ကောငျ​​လေးဟာ သူ့ရဲ့ အမွငျ့​ဆုံး အခြိနျ​ ​ရောကျ​​နတော ဖွဈ​​ကောငျး ဖွဈ​နိုငျ​ပါတယျ​။ အကယျ​၍ သူ ဒီထကျ​ပိုပွီး စှမျး​ဆောငျ​ပွ မှသာ ဒီဆုကို ဆှတျ​ခူး ပါလိမျ့​မယျ​။ သူ ဒီဆုကို လုံးဝ ရခဲ့သငျ့​ပါတယျ​။
အကယျ​၍ သူ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား ဆှတျ​ခူးပွီး ၊ ခနျြ​ပီယံလိဂျ​ဖလား မရ ခဲ့ဘူးဆိုရငျ​ ဖီဖာက ​ပေးမှာလား? သူတို့ ဒါကို ဂရု ပွူသှားမှာလား? သူတို့ဟာ ကြှနျ​​တျော​တို့ လိဂျ​ကို ဂရုမစိုကျ​ပါဘူး။ တဈ​နှဈ​တာ အ​ကောငျးဆုံး အသငျး ဆိုရငျ​လညျး သူတို့ဟာ လာလီဂါ က လူ​တှကေိုပဲ ​​ရှေးခယျြ​​လေ့ ရှိပါတယျ​။ ဒီထဲမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ ကစားသမား မပါဝငျ​ ခဲ့ပါဘူး။” လို့ ​ပွောသှားပါတယျ​။